Homepage – Fashion | CineSandesh
नेपाली फिल्म रिभ्यु
हलकारा फिल्मबाट हट्सनमा नेपालले पायो उत्कृष्ट अभिनेता र सिनेम्याटोग्राफरको उपाधी
कट्रिना–विक्कीले गरे बिहे, हेर्नुहोस् तस्बिरहरू
cinesandesh - December 29, 2021 0
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ र विक्की कौशलले बिहीबार विवाह गरेका छन्। भारतको राजस्थानस्थित माधोपुरको सिक्स सेन्स फोर्ट बर्वारामा उनीहरूले विवाह गरेका हुन्। स्थानीय समयानुसार साँझ ५...
विवाह गर्दै इन्डियन आइडल-१२ की फाइनलिस्ट सायली काम्बले
गायन रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल-१२’ की फाइनलिस्ट सायली काम्बलेले विवाह गर्ने भएकी छन्। आफ्नो गायकीबाट लाखौंको मन जित्न सफल गायिका सायलीले बिहिबार आफ्नो प्रेमी धवलसँग...
सलमान खानलाई टोक्यो सर्पले
फार्महाउसमा जन्मदिन मनाउन गएका बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सर्पले डसेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार शनिबार मुम्बईस्थित आफ्नो पानभेल फार्महाउसमा सलमानलाई सर्पले डसेको हो। सोमबार ५६ औं जन्मदिन...
गायन रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल-१२’ की फाइनलिस्ट सायली काम्बलेले विवाह गर्ने भएकी छन्। आफ्नो गायकीबाट लाखौंको मन जित्न सफल गायिका सायलीले बिहिबार आफ्नो प्रेमी धवलसँग ओठी साटेकी हुन्। सायली र धवलको औठी साटेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। भिडिओमा सायलीले घुँडा...
फार्महाउसमा जन्मदिन मनाउन गएका बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सर्पले डसेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार शनिबार मुम्बईस्थित आफ्नो पानभेल फार्महाउसमा सलमानलाई सर्पले डसेको हो। सोमबार ५६ औं जन्मदिन मनाउने क्रममा उनी फार्महाउस पुगेका थिए। उनलाई सर्पले डसेपछि तत्कालै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। ६ घण्टा अस्पतालमा उपचार...
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ र विक्की कौशलले बिहीबार विवाह गरेका छन्। भारतको राजस्थानस्थित माधोपुरको सिक्स सेन्स फोर्ट बर्वारामा उनीहरूले विवाह गरेका हुन्। स्थानीय समयानुसार साँझ ५ बजे दुवैले सात फेरा लिएका छन्। विक्की कौशल र कट्रिना कैफले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट विवाहको तस्बिर...
सुस्मिता सेनले तोडिन् तीन वर्षको प्रेम सम्बन्ध
सन् १९९४ की मिस युनिभर्स विजेता सुस्मिता सेनले आफ्नो तीन वर्षभन्दा पुरानो प्रेम सम्बन्धलाई 'ब्रेकअप' गरेकी छन्। उनले रोहमन सलसँगको आफ्नो प्रेम सम्बन्ध अन्त्य भएकोबारे बिहीबार इन्स्टाग्राममार्फत् सार्वजनिक जानकारी दिएकी हुन्। सम्बन्ध टुटे पनि रोहमन सधैं आफ्नो साथी रहने सुस्मिताले...
सञ्जय लीला भन्साली बलिउडमा यस्ता निर्देशकका रूपमा चिनिन्छन् जसले आफ्नो सिनेमामार्फत् दर्शकलाई एउटा भव्य र अद्भूत संसारमा विचरण गराउँछन्। उनले यात्रामा लैजाने त्यो संसार इतिहासको कुनै कालखण्ड हुनसक्छ वा तपाईं-हामी बाँचिरहेको आजकै समय पनि हुनसक्छ। इतिहासको कालखण्ड होस् वा आजको समय-...
कपिल शर्मा शोमा पुगेर एनटिआर र रामचरणले के गरे?
बलिउडमा फिल्म रिलिज हुनुअघि त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने एउटा प्रमुख थलो बनेको छ, कपिल शर्मा शो। बलिउडका एक-से-एक सेलेब्रिटीहरू आफ्नो फिल्म लिएर सोनी च्यानलमा प्रसारण हुने कपिल शर्मा शोमा जाने गरेका छन्। यही सिलसिलामा कपिल शर्मा शोको स्टेजमा पुगे, बहुप्रतीक्षित 'आरआरआर' का...
आमिर खानले गरे प्रेमिकासँग गुपचुप बिहे !
१५ वर्षको लामो वैवाहिक यात्रापछि बलिउड अभिनेता आमिर खान र उनकी श्रीमती किरण रावले गत जुलाईमा सम्बन्ध-विच्छेद गरे। आफ्नो दोस्रो विवाह सफल हुन नपाउँदै आमिर तेस्रो पटक बिहे गर्न खोजिरहेको चर्चा पनि निकै थियो। अहिले भने उनले गुपचुप आफ्नी प्रेमिकासँग...
प्रभासको नयाँ चलचित्र राधेश्यामको ट्रेलर सार्वजनिक (हेर्नुहोस)
दक्षिण भारतिय अभिनेता प्रभासको नयाँ चलचित्र राधेश्यामको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा अभिनेत्री पुजा हेड्गे पनि देखिएकीछिन् ।ट्रेलरमा प्रभास र पुजाको प्रेम देखाइएको छ । प्रभासलाई ट्रेलरमा उनी हस्तरेखा पढ्ने मान्छेको रुपमा देखाइएको छ। चलचित्र राधा कृष्ण कुमारले...
नेपाली फिल्म निर्माता : आफ्नासँग भिड्ने, विदेशीसँग भाग्ने
२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली चलचित्रकर्मीको सोच र काम गर्ने शैली कोरोना महामारीपछि बदलियो होला भनेर सोचिन्छ भने त्यो गलत हुन सक्छ । किनकि, लकडाउनअघि नेपाली चलचित्रका निर्माताहरु आफ्नै देशमा बनेका चलचित्रसँग भिड्ने, तर विदेशीसँग भने भाग्ने शैलीमा काम...
Reporter1 - April 27, 2022 0
नेपाली फिल्म हलाकाराले हट्सनमा उत्कृष्ट नायक तथा सिनेम्याटोग्राफरको उपाधी प्राप्त गरेको छ। नेपाली फिल्म हलकारामा अभिनय गरेर नायक महेश त्रिपाठीले हट्सन वर्ल्डफेस्टमा उत्कृष्ट अभिनेताको उपाधी पाएका छन्। फिल्म हलकाराको निर्देशन विक्रम सापकोटाले गरेकाहुन्। उक्त फिल्मको लागि चिन्तन राजभण्डारीले उत्कृष्ट सिनेम्याटोग्राफरको उपाधी...
कबड्डी ४ को ट्रेलर बुधबार सार्वजनिक हुँदै
नेपाली फिल्म कबड्डी ४ को ट्रेलर सार्वजनिक हुने भएको छ। निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार फिल्मको ट्रेलर बुधबार ३ बजे सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। फिल्ममा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, मिरुना मगरका साथमा बुद्दि तामाङ आदिको मुख्य भुमिका रहेको छ। दर्शकहरुमा...
सलमान खान वैशाखमा काठमाडौं आउने
Reporter1 - February 16, 2022 0
भारतीय सिने स्टार सलमान खान वैशाख ३ गते नेपाल आउने भएका छन्। काठमाडौंको रंगशालामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन सलमान नेपाल आउने भएका हुन्। सलमानका साथमा नायिका ज्याकलिन फर्नान्डिज, प्रभु देवा लगायतका कलाकार उपस्थित हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। दसकअघि ब्रायन...
राजेश हमाल र निरुता सिंहको मुख्य भुमिकामा ‘हजुर मुसुक्कै’ सार्वजनिक
Reporter1 - February 13, 2022 0
कृष्ण बिक र रचना रिमालको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। ओएसआर डिजिटलबाट सार्वजनिक भएको ‘हजुर मुसुक्कै’ गीतमा राजेश हमाल र निरुता सिंहको मुख्य भुमिका रहेको छ। उनीहरुक साथै म्युजिक भिडिओमा कलाकार प्रियाना आचार्य, सुरविर पण्डित तथा प्रिन्स विश्वकर्माको मुख्य अभिनय...
वरिष्ठ छाँयाकार धुंजुलाई पत्नीशोक
cinesandesh - February 12, 2022 0
नेपाल चलचित्रका वरिष्ठ छाँयाकार तथा एभरेष्ट फिल्म एकेडेमीका प्रिन्सिपल गौरीशंकर धुजु श्रेष्ठलाई पत्नीशोक परेको छ। उहाँकी पत्नी सरिता धुंजु श्रेष्ठको ५८ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबार धुंजुको हरिसिद्दी क्यान्सर अस्पतालमा देहान्त भएको हो।
हलिउड गायिका एवं नायिका जेनिफर लोपेजले चौथो पटक विवाह गर्न लागेकी छन्। उनले ‘ब्याटम्यान’ अभिनेता बेन एफ्लेकसँग चौथो विवाह गर्न लागेकी हुन्। पछिल्लो समय लोपेज र एफ्लेकको गहिरो प्रेम सम्बन्धरहेको चर्चा हुँदै आएको थियो। उनीहरु सार्वजनिक स्थानमा पनि धेरै पटक भेटिँदै आएको...
अभिनेता नवाजुद्दीन विनोद खन्नाको शैली पछ्याउँदै
बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा छुट्टै स्थान बनाएका अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकीले ‘फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड’ जितेका छन्। हालै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत रिलिज भएको ‘सिरियस म्यान’ चलचित्रबाट उनले फिल्म फेयर अवार्ड जितेका हुन्। उनले सिरियस म्यानमा गरेको अभिनय ‘अन्तर्राष्ट्रिय एमी अवार्ड’ मा ‘उत्कृष्ट अभिनेता’ को...
Contact us: rayroshan53@gmail.com
नेपाली फिल्म रिभ्यु2